दरबार संग्रहालयको सम्पन्नता- विविधा - कान्तिपुर समाचार
दरबार संग्रहालयको सम्पन्नता
कार्तिक २८, २०७५ दिनेश अधिकारी
काठमाडौँ — कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरमा रहेका सामग्री ल्याएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिनुपर्छ ।
राजतन्त्र अन्त्य भएको करिब दस वर्षपछि गएको असोज २९ गते राजाका श्रीपेच, राजदण्ड र मुकुट लगायतका सामग्री सर्वसाधारणले हेर्न पाउनेगरी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखियो । यो राम्रो काम हो । यस्तै सामग्रीले सम्पन्न हुनसक्ता सङ्ग्रहालयको महत्त्व बढ्ने हो ।
सङ्ग्रहालयमा श्रीपेच लगायतका ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तु प्रदर्शनीमा राखिएको समाचार प्रकाशन/प्रसारणमा आएसँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई थप सम्पन्न गराउन आफूले गरेको
असफल प्रयासको सम्झना मेरो मस्तिष्कमा बौरिएर आयो ।
२०६६ असोजपछि २०६७ वैशाख बीचको कुरा हो । त्यसबेला म राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य समेतका नाममा रहेको सम्पत्ति खोजबिन र संरक्षण गर्दै ट्रष्टमा ल्याउन र त्यो सम्पत्ति वा त्यसबाट आर्जित धन सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न, गराउन २०६४ सालमा स्थापित नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिव थिएँ ।
सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा भरतपुर चितवनस्थित दियालो बङ्गला, हेटौंडा मकवानपुरस्थित कान्ति–ईश्वरी घर र पोखरा कास्कीस्थित रत्न मन्दिरको अनुगमन/निरीक्षण गर्न जाँदा ऐतिहासिक महत्त्वका तस्बिर, उपहार, कलाकृति, कलात्मक वस्तुसमेत रहे–भएको देखियो । ट्रष्टको अधीनमा रहेका ती चिज अर्थोपार्जनका लागि ट्रष्टले जेकेही गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था थियो, छँदैछ ।
तर यसो गर्नु सर्वथा उचित थिएन । ती सामग्रीलाई त्यही रूपमा छाड्दा उचित संरक्षण होला जस्तो लागेन । मैले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समक्ष पत्राचार गरेर ती शाखा दरबारमा रहेका सामग्री नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनका लागि राख्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै ट्रष्टले ती सामग्री उपहारस्वरुप निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पठाएँ । त्यसपछि मौखिक रूपमा तत्कालीन नेतृत्व समक्ष एकाधपटक अनुरोध पनि गरेँ । तर सुनुवाइ भएन । त्यो सोचले मूर्तरूप लिन पाएन ।
फेरि एउटा अर्को संयोग पर्‍यो, २०६८ सालमा । म सरुवा भएर संस्कृति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेँ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय आफ्नो चासो र जिम्मेवारीभित्र पर्न आयो । मन–मस्तिष्कमा पहिलेको कुरा ताजै थियो । सोचेँ– अब नेपाल ट्रष्टसँग ती सामग्री माग गरेर नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।
आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफल र सहमतिपछि कान्ति–ईश्वरी घर हेटौंडा, दियालो बंगला भरतपुर र रत्न मन्दिर पोखरामा रहेका कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्री प्रदर्शनीमा राख्न नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई पत्रमार्फत अनुरोध गर्‍यौँ । संस्कृति सचिवको जिम्मेवारीमा छोटो समयमात्रै रहेकाले ताकेता गर्न भ्याइएन । तर पछिसम्म बुझ्दा पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट संस्कृति मन्त्रालयको प्रस्तावउपर प्रतिक्रिया प्राप्त भएन ।
न दिँदा लिइयो, न माग्दा दिइयो । त्यो सोच र प्रयास असफल हुनपुग्यो ।
शाहवंशसँग गाँसिएर आएका कारण श्रीपेच, राजदण्ड, मुकुट आदिको ऐतिहासिक महत्त्व छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यही शाहवंशसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको कान्ति–ईश्वरी घर, दियालो बंगला वा रत्न मन्दिरका नाममा रहेका शाखा दरबारहरूमा रहेका सामग्री पनि प्रदर्शनका लागि महत्त्वपूर्ण वस्तु हुन् ।
सम्झना भएसम्म कान्ति—ईश्वरी घरमा राजा त्रिभुवनलाई स्वीटजरल्यान्ड लगायतका देशहरूबाट प्राप्त उपहार, दियालो बंगलामा रहेको राजा (त्यतिखेर युवराज) वीरेन्द्रको कोठामा कलाकार लैनसिंह वाङ्देलका तैल—चित्रहरू लगायत दरबारका अन्य कक्षमा पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्री थिए । रत्न मन्दिरमा पनि त्यस्तै हो । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा राखे पनि नराखे पनि यी सामग्रीको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी भित्रकै विषय हो ।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई थप आकर्षक बनाउन माथि उल्लेख गरिएका र नगरिएका स्थानमा रहेका शाहवंशसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्री नेपाल ट्रष्ट समेतबाट प्राप्त गरी ‘कान्ति–ईश्वरी घर कक्ष’, ‘दियालो बंगला कक्ष’ वा ‘रत्न मन्दिर कक्ष’का रूपमा छुट्टाछुट्टै कक्ष निर्माण गरी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विश्वास छ, नेपाल–सरकार र विशेषगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका पुरातत्त्व विभाग र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय स्वयंको पनि बेलैमा ध्यान जानेछ । राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिनालाई व्यक्तिगत नोक्सानीजस्तो महत्त्व नदिने हाम्रो संस्कारका कारण हुनसक्ने क्षतिबाट बेलैमा बचाइनेछ । बेला घर्किसकेको छैन । अझै ढिलो भयो भने धेरै कुरा फेला पार्न कठिन हुनेछ ।
लेखक पूर्वसंस्कृति सचिव हुन् । प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७५ ०९:१३
मायाले जितेको संसार
भाद्र २३, २०७५ दिनेश अधिकारी
काठमाडौँ — टुंगोमा पुग्न नसकिरहेकै अवस्थामा केही हितैषीमार्फत एम्सको हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत डा. दीपक गौतमसंग सम्पर्क स्थापित भयो । टेलिफोनमा कुरा हुँदा दीपकजीले हार्दिकताको दैलो खोलेर मलाई यसरी सम्झाउन भयो कि मैले तत्कालै भनें– अब म अरू विकल्पमा जान्नँ ।
एम्स, हाडजोर्नी विभाग प्रमुख डा. मलहोत्रासँग अधिकारी
२०७५ साल असार ३२ गते बिहान ९ बज्नुभन्दा केहीमिनेटअगाडि ह्विलचेयरमा धकेलिएर म जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रमा सेन्टर, एम्स (अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, एम्स) को अप्रेसन थिएटरतिर लागें । थिएटरभित्र लैजानुअघि मेरो ब्लड प्रेसर जाँच भयो । अवस्था सामान्य देखियो । अब म सर्जरीका लागि योग्य ठहरिएँ । दाहिने खुट्टाको टोटल हिप रिप्लेसमेन्ट हुँदै थियो मेरो ।
थिएटरमा एप्रोन लगाएका ५/६ जना मानिस देखें । केही क्षणमै मलाई ‘तपाईंको ढाडमा एनेस्थेयियाको इन्जेक्सनदिनु छ दिऊँ ?’ भनेर सोधियो । एनेस्थेसिस्टले सोधेलगत्तै मैले सकारात्मक जवाफ दिएँ । उनले इन्जेक्सन लगाए । त्यसपछि मेरो टाउकोमा पातलो कपडाजस्तो केही राखेर ढाकिदिए । अब म यताउति देख्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ । थाहा छैन— कति बेला सर्जरी सुरु भयो । लगत्तै शल्यक्रियाको नेतृत्व गर्नुहुने एम्सको हाडजोर्नी विभाग प्रमुख प्रोफेसर राजेश मलहोत्राले अप्रेसन राम्रो भएको जानकारीसहित मलाई बधाई दिनुभयो र ठट्टामा भन्नुभयो— अधिकारीजी, अहिल्यै हिंड्ने हो कि ?
मलाई अप्रेसन थिएटरबाट बाहिर ल्याइयो र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखियो । मैले एक जना नर्समार्फत बाहिर बसिराखेकी मेरी पत्नीलाई अप्रेसन सफल भएको जानकारी पठाएँ । २/३ घण्टापछि निगरानी कक्षबाट बाहिर निकालियो । श्रीमती र भाञ्जाको अनुमानविपरीत म मुस्काउँदै बाहिर आइपुगें र, स्टेचरमा सुतीसुती उनिहरूसँग हात मिलाएँ ।
पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा रहेको मलाई सर्जरी गरेकै दिन राति करिब १० बजेतिर डा.दीपक गौतम आपैंmले आड दिएर पहिले त मलाई बेडमा ठाडो बसाउनुभयो । त्यसपछि दुवै खुट्टाले मचक्क टेकेर भुइँमा उभिन प्रोत्साहित गर्नुभयो । यही बीचमा कतैबाट ‘वाकर’ ल्याइसक्नुभएको रहेछ । भन्नुभयो— हिंड्न पनि आजैबाट सुरु गरूँ न त । मैले वाकर समातें । आफू पनि सँगसँगै लागेर त्यत्तिखेरै उहाँले मलाई १५/२० पाइला हिंडाउनुभयो । मलाई लाग्यो— काम नलाग्ने भइसकेको मेरो खुट्टाले नयाँ जीवन पायो ।
त्यो घडी मलाई मेरो विगत आँखाअगाडि आइरहेकै थियो । पहिलोपल्ट २९ माघ, २०६१ का दिन वीर अस्पताल काठमाडौंका हाडजोर्नी विभाग प्रमुख डा.अशोक बज्राचार्यले ‘टोटल हिप रिप्ल्ेसमेन्ट’ गर्नुपर्छ भन्ने लिखित राय दिनुभएको थियो । त्यसपछि म भौंतारिंदै कहिले बीएन्डबी त कहिले नेपाल मेडिकल कलेज र मेडिकेयर अस्पताल धाउन थालें । सबैको राय एकै किसिमको नपाएपछि एक जना शुभचिन्तकको सल्लाह र सहयोगमा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा गएर डा.राजेश मलहोत्रालाई जँचाएको थिएँ । उहाँले भन्नुभएथ्यो— तपाईंको हिप रिप्लेसमेन्ट त गर्नुपर्छ । तर, केही एक्सरसाइज गरेर यसलाई १५ देखि १८ वर्षसम्म पछाडि धकेल्न सक्नुहुन्छ । अहिलेलाई त्यही गर्नु बेस हुन्छ । मैले उहाँकै सल्लाह पछयाएँ ।
यसो गर्नाको पछाडि मूलभूत रूपमा दुईवटा कारण थिए । पहिलो त त्यसबेला स्टिलको सामग्री इम्प्लान्ट गरिन्थ्यो र यसको आयु लगभग १०/१२ वर्ष मात्रै सुनिश्चित थियो मात्रै होइन, दोहोर्‍याएर फेर्ने कुरा फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै गाह्रो छ भनिन्थ्यो । दोस्रो, विज्ञान र प्रविधिमा दिनानुदिन भइरहेको प्रगतिको कारण समय बित्दै जाँदा नयाँनयाँ सम्भावना र उपाय फेला पर्ने आशा पनि थियो । भयो पनि त्यस्तै । अहिले इम्प्लान्ट गरिएको सामग्री सेरामिक हो र सामान्य रूपमा बुझ्दा यसले ‘लाइफ टाइम’ काम गर्छ । एउटा अर्को संयोग पनि के जुर्‍यो भने २०६१ सालमा मलाई अप्रेसनपछाडि धकेल्न सल्लाह दिने डाक्टर मलहोत्रा नै अहिले मेरो सर्जरीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको थियो ।
मैले बुझेसम्म एम्स सरकारी अस्पताल हो । यो, स्वायत्त रूपमा सञ्चालित छ । एम्समा सम्पन्न मेरो सर्जरी त्यत्ति सजिलै सम्भव भएको भने होइन । २०७४ सालको अन्त्यतिर आइपुग्दा जब मलाई चुपचाप बस्दा पनि दुखिरहने, आधा घण्टा उभिँदा वा १० मिनेट हिँड्दा पनि नदुख्ने औषधि सेवन गर्नुपर्ने, खुट्टा थोरै पनि नखुम्चिने र भर्‍याङ चढ्न गाह्रो हुने भएपछि मैले सर्जरीका लागि दिल्लीकै पनि निजी क्षेत्रका केही अस्पतालमा पत्राचार गरिराखेको थिएँ । टुंगोमा पुग्न नसकिरहेकै अवस्थामा केही हितैषीमार्फत एम्सको हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत डा.दीपक गौतमसँग सम्पर्क स्थापित भयो । १२/१५ मिनेट टेलिफोनमा कुरा हुँदा दीपकजीले हार्दिकताको दैलो खोलेर मलाई यसरी सम्झाउनुभयो कि मैले तत्कालै भनें— अब म अरू विकल्पमा जान्नँ । मेरो उपचार अब तपाईंकै जिम्मा भयो । संसार जित्ने भनेको मायाले नै रहेछ । जितेसरह भयो । यो त भयो मेरो कुरा ।
यता केही समयदेखि काठमाडौंमा भन्न थालिएको छ— भारतको नयाँ दिल्ली नेपालीहरूको उपचार केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । एक हिसाबले हो पनि । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रका नेता–कार्यकर्ता र उच्च प्रशासनिक व्यक्ति साधारणभन्दा साधारण उपचार गर्न पनि विदेश जाने कारण एकातिर हाम्रा अस्पतालमाथिको विश्वासमा आघात पुगेको छ । अर्कातिर हाम्रा अस्पतालप्रतिको चासो र चिन्ता सरकारी स्तरमा घटेको पनि छ । फलत: नयाँ मेसिन वा प्रविधिको अभाव सरकारी अस्पतालमा जताततै खड्कन थालेको छ । देशमा परीक्षण मेसिन नै नभएको कारण रोग पत्ता लगाउनकै लागि करोडौं खर्च गरेर विशिष्ट व्यक्तिलाई विदेश पठाउनुपरेको परिस्थिति हामी धेरैलाई थाहा छ । यस्ता विविध कारणले पनि नेपालका बिरामीहरूको दिल्ली दौडाहा स्वाभाविक हुँदै आएको छ ।
बिर्संदाबिर्संदै पनि यो घटना यत्तिखेर किन पनि सम्झिरहेको छु भने स्वास्थ्योपचार मानव सेवा पनि हो भन्ने कुराको हेक्का निजी क्षेत्रका हाम्रा धेरैजसो अस्पतालले राख्नै छोडिसकेका छन् भन्दा हुन्छ । अस्पताल, चाहे काठमाडौंको होस् वा दिल्लीको ।